शारीरिक सम्पर्क गर्दा पुरूषलाई भन्दा महिलालाई किन बढी फाइदा हुन्छ ! कसरि ? – Hamrosandesh.com
महिलाहरुका लागि शारीरिक सम्पर्क गर्नुका निकै फाइदाहरु छन् । के तपाईंलाई थाहा छ, शारीरिक सम्पर्क गर्नाले महिलाको तौल घट्छ, छाला चम्किलो हुन्छ र मुटुको रोगहरु पनि लाग्दैन । महिलाहरुका लागि से क्स किन आवश्यक छ र यसको फाइदा के हो थाहा पाउनुहोस्ः
५. मिठो निन्द्राः शारीरिक सम्पर्कनिन्द्रालाई बढाउँछ र अक्सिटोसिनलाई हटाउन मद्दत गर्दछ, जसले निन्द्रा आउन मद्दत गर्छ । यहि कारणले गर्दा पुरुषहरुलाई से क्सलगत्तै निन्द्रा लाग्ने गर्दछ ।
११. शरिरलाई सुगठित बनाउँछः थुप्रै प्रकारको यौ-न आसनले भिन्न–भिन्न मांसपेशीको समूहलाई बलियो बनाउने गर्दछ जसले शरिरलाई सुगठित बनाउन मद्दत गर्दछ ।
यो नि र लिं गयसरी मालिस गर्दा बढ्छ यौ-न क्षमता
बुढेसकालमा यौ न दुर्बलता हुनु स्वाभाविकै हो । बुढेसकालमा यौ-न चाहना हुने भए पनि यौ न शक्ति कम हुँदै जान्छ । युवाअवस्थामै यौ-न दुर्बलता हुनु समस्या हो । व्यक्तिको तल्लो थालामस, पिट्युटरी ग्रन्थी र लक्षित अंगमा असर गर्ने हर्मनको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
साधारण अवस्थामा यसले यौ न उत्कर्षमा पुग्नलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । महिला र पुरुषको एन्ड्रोजिन हर्मनको निशेचनमा गडबढी भयो भने यौ-न शक्तिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । विभिन्न औषधि तथा दुव्र्यसनीका कारणले पनि यौ न शक्तिमा कमी आउँछ ।